Goob-joogayaal caalami ah oo soo gaadhay Somaliland | Berberanews.com
Home WARARKA Goob-joogayaal caalami ah oo soo gaadhay Somaliland
Goob-joogayaal caalami ah oo soo gaadhay Somaliland
Hargeysa, 24 May 2021-(Berberanews)-Koox ka tirsan Kor-joogayaasha Caalamiga ah oo Kormeeri Doona Doorashooyinka Golayaasha Deegaanka iyo Wakiillada Somaliland.
Doorashooyinka in badan dib u dhacay ee Golaha Wakiillada iyo doorashada saddexaad ee Golaha Deegaanka Somaliland ayaa qabsoomi doona 31-May,2021, waxaana Hargeysa soo gaadhay 12 kor-joogayaasha Caalami ah.
Guddiga Doorashooyinka Qaranku waxa ay martiqaadeen Kor-joogayaasha Caalamiga ah ee Doorashooyinka oo uu maalgeliyay Xafiiska Horumarinta iyo Barwaaqo Sooranka ee Dalka Ingiriisku. Kor-joogayaasha waxa soo qabanqaabisay Waaxda Horumarinta iyo Qorshaynta ee Jaamacadda UCL ee Magaalada London. Kor-joogayaasha Caalamiga ahi waxa ay kormeeri doonaan doorashooyinka si waafaqsan Heshiiska Mabaadii’da Caalamiga ah ee Kor-joogayaasha Caalamiga ah, kuwaas oo awoodda saaraya dhexdhexaadnimada kor-joogennimada.
Tani waa doorashii shanaad ee ay ka qaybgelayaan Kor-joogayaal Caalami ah oo ka socda waaxda Horumarinta iyo Qorshaynta ee Jaamacadda UCL laga soo bilaabo sannadkii 2005. Waajibaadka Kor-joogayaasha Caalamiga ah waxa ka mid ah qiimaynta Xeerka guud ee Doorashooyinka Somaliland iyo Diiwaangelinta Cod bixiyayaasha iyo sida loo dhaqan geliyay. Doorashooyinku waa astaan muhiim ah oo muujinaysa dimuqraadiyadda Somaliland; dhowr goor oo dib u dhac ku yimid labada doorasho, tani waa markii ugu horraysay ee la isku sidko doorashada wakiillada iyo dawladaha hoose.
“Doorasho kastaa waa muhiim, doorashooyinka imika dhacayaa iyada oo ah markii labaad ee ay Somaliland qabato doorashooyinka golaha wakiillada, waxa ay noqon doonaan Gole Wakiillo oo ku soo baxay codka dadwaynaha. Isku darista labada doorasho ee deegaanka iyo golaha wakiilladu waxa ay sii kordhinaysaa muhiimadda codka ee bulshada reer Somaliland. Kormeerayaal ahaan, kaalintayadu maaha keliya ololaha, maalinta codaynta iyo natiijada oo keliya, laakiin waxa kale oo noo muhiim ah xeerarka doorashooyinka iyo sida loo fulinayo”
Previous articleDaawo bilicda Buurta Wagar ee Gobolka Saaxil
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo daah-furay ololaha Xisbiga Kulmiye